Thwebula Comodo Cloud Antivirus 1.21.465847.842 – Vessoft
WindowsUkuphephaAntivirusComodo Cloud Antivirus
Ikhasi elisemthethweni: Comodo Cloud Antivirus
I-Wikipedia: Comodo Cloud Antivirus
I-Comodo Cloud Antivirus – i-antivirus enamamojula amaningana okuvikelwa ukuthola nokunciphisa izinhlobo ezihlukahlukene zegciwane. Isofthiwe isebenzisa ubuchwepheshe besimanje samanje ukuze ithumele idatha kumaseva ayo futhi ihlaziye amafayela angaziwa ngemuva. I-Comodo Cloud Antivirus ingakwazi ukuskena izingxenye ezibaluleke kakhulu zesistimu kwimodi yokushesha, ukuhlola ngokucophelela amafayela noma amafolda, futhi wenze ikhompyutha egcwele ngokukodwa ngokuvumelana nezidingo zomsebenzisi. Isofthiwe ihlale ihlola wonke amafayela nezinqubo zezenzo ezisolisayo futhi ixwayisa ngokushesha umsebenzisi mayelana nomsebenzi wabo osolisayo ongasongela ukuphepha kwesistimu. I-Comodo Cloud Antivirus ngokuzenzakalelayo ihlukanisa amafayela nezinhlelo zokusebenza zibe imvelo ebonakalayo ukuqhuba amafayela angaziwa kanye ne-malware yosuku lwangaphandle ngaphandle kokulimaza ikhompyutha yakho. Futhi, i-Comodo Cloud Antivirus ixwayisa umsebenzisi mayelana nemizamo yesofthiwe enonya ukwenza izinguquko ezingagunyaziwe kuzilungiselelo zesiphequluli.
Ukuskena ifayela lefu
Hlola amafayela asolisayo kwi-sandbox
Ukuhlukanisa amafayela ayingozi ekuhlukaniseni
Thwebula Comodo Cloud Antivirus
I-Comodo Dragon – isiphequluli esisheshayo sigxile kwezokuphepha nobumfihlo bomsebenzisi. Isoftware ivimba amawebhusayithi enonya, i-spyware futhi ikuvumela ukuthi uxhume izandiso.
I-Comodo Internet Security Qedile – i-antivirus ine-firewall ethembekile, isithwebuli samafu, isitoreji esiphephile online, ubuchwepheshe bokuhlaziya bokuziphatha kanye namabhokisi we-auto-sandbox.
I-Comodo Internet Security Pro – i-antivirus isekela ukuhlaziya kokuziphatha, isicishamlilo, isithwebuli sefu, ama-HIP, i-sandbox kanye nobunye ubuchwepheshe besimanje bokuvikela.
Amazwana ku Comodo Cloud Antivirus
Comodo Cloud Antivirus software ehlobene
I-ComboFix – indlela elula yokuthola nokususa idatha eyingozi. I-antivirus ithola izinsongo ezivelele kakhulu zohlelo futhi zizibonisa embikweni onemininingwane.
Lena isofthiwe yokuphepha yezinga eliphezulu ukuvikela ikhompyutha yakho noma iseva ngokumelene nezinsongo zenethiwekhi nezinhlelo zokusebenza ezingaphephile.
Amageyimu angenamkhawulo – isisetshenziswa esisiza ukwethula imidlalo ne-software kumodi engenamkhawulo yesikrini esigcwele, noma ngabe le modi ayisekelwa ngokuzenzakalelayo.